Mudankii Uun’kow Udgoonaw Rasuulkii Q.4aad (WQ: Axmed Cali Kaahin) - SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD | SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD
Mudankii Uun’kow Udgoonaw Rasuulkii Q.4aad (WQ: Axmed Cali Kaahin)
Geesinmada marka dagaal lagalo ee xaaladu adkaato Baraa wuxuu sheegay in ay ku gaban jireen Nabiga Salaahu Calayhi Wasalam oo gabaad ay ka dhigan jireen geesinimadiisa dhinaca cadawgana cidi kama xigi jirin. Wuxuuna la xaalad ahaa oo wuu la gaajoon jiray Saxaabadiisa oo waxaa dhici jirtay in caloosha labba dhagax uu ku xidho.
Dhinaca kale waxa uu aad u jeclaa in la isku naxariisto gaar ahaan dadka jilicda san caruurta, iyo dumarka iyo dadka waawayn gaar ahaan waxaanu yidhi Salaahu Calayhi Wasalam “ Raxmad baa la ii soo saaray” anigu waxaan ahay raxmad lagu hanuuno, Anas wuxuu yidhi maan arag mid caruurta uga naxariis badan haddii cidi u timaado wax ka doontana wuu siin jiray haddii uu hayo.
Sidoo kale waxa uu booriyay Salaahu Calayhi Wasalam in la dhawro ma yeedhaanka iyo noolaha inalla nool iyo ka duur joogta ah ba , waxa uu soo maray Awr boga iyo beerku isku dhagaay, waxaanu yidhi “ Allaah kaga cabsada ma yeedhanka aan hadlanayn wanaag ku rarta wanaagna ku cuna” Allaah samafalka meel walba wuu dhigay haddaad gawracaysaan wanaajiga gawraca ugana raaxeeya kaad gawracaysaan mididiinana afeeya oo uga raaxeeya neefka”,neefkana labba jeer ha dilina.
Waxa kale oo caan ah in gabadh lagu caddaabay bisad ay xidhay ilaa ay dhimanaysay, taasi oo ay naar ku gashay, wax may siin oo may waraabin markay xidhatay, manayna sii dayn si ay calaf u raadsato” Nabigu Salaahu Calayhi Wasalam naxariistiisu kumay koobnay aadamaha oo kaliya iyo xayawaanka xataa wuxuu diiday in geedaha ama dhirta la iska jaro sabab la’aan.
Dhinaca kale dhacdooyinka cajiibka ahaa waxa ka mida in gabadh reer Makhsuum ahi wax xaday, markaasay yidhaahdeen yaa ka ergaynaya Rasuulka Salaahu Calayhi Wasalam Salaahu Calayhi Wasalam waxaana ergayn kara uun bay yidhaahdeen Usama ina Sayid oo Rasuulku Salaahu Calayhi Wasalam jeclaa.
Usaama wuu la hadlay Usama waxaanu Rasuulkii Ilaahay Salaahu Calayhi Wasalam ku yidhi “ma Xad xuduuda ilaahaybaad ka ergaynaysaa’? Ka diba wuu kacay waxaanu yidhi “ kuwii idinka horeeyay waxaa lagu rogay waxay ahaayeen marka kooda sharafta leh wax xado way dayn jireen, haddii kooda jilicdasani xadana way ku oogi jireen xadka. Ilaahay baan ku dhaartee haddii ay Faadumo ina Maxamed Xado waan jari lahaa gacanteeda, sidiibaana lagu fuliyay Xadkii oo gacantii lagu jaray, markii dambe way toobad keentay waanay toosnaatay.
Wuxuu ahaa Salaahu Calayhi Wasalam Wanaaga mid uga dheereeya, dabaysha, gaar ahaan Bisha Ramadaan waxaanu jibriil la subcin jiray quraanka, dhinaca kale dadka waxa uu wax u siin jiray si ay diinta ugu soo dhawaadaan wax jirtay in nin u yimid oo xoolo badna uu siiyay, markii uu reerkoodii ku noqday waxa uu yidhi waar Islaama Muxamed wuu bixinayaa deeq aanu faqri ka cabsanayn.
Dadkuna waxay u iman jireen iyagoo aduunyo doonaya waxayna ka tagi jireen iyagoo diinta aduunyada ka jecel oo aduunyada iyo waxa dhexyaalaba ay kala qiimo badan tahay Diintu. Safwaan wuxuu yidhi wuu isiiyay Rasuulku Salaahu Calayhi Wasalam deeq, isagoo aan dadka ugu necebahay markii uu isiiyay wuxuu noqday kaan dadka ugu jecelahay. Markaa diinta deeqdu u adeegsaday fidinteeda.
Dhinaca kale wuxuu ahaa mid ka xishood badan gabadh gashaanti ah markuu wax diidana wajigiisaanu ka garan jirnay bay yidhaahdeen saxaabadu, xishoodkuna waa qayb iimaanka ka mida, diin kastaa waxay leedahay dhaqan dhaqanka Islaamkuna waa xishoodka ayuu yidhi Salaahu Calayhi Wasalam “ haddaanad xishoon waxaad doonto same”.
Iimaankuna waa dhawr iyo toddobaatan qaybood waxaana ugu qiimo badan Ashahaadada waxaana ugu hoosaysa in dariiqa laga duwo dhibaatada xishoodkuna waa qayb ka mida iimaanka. Waxaan kasoo ururiyay Kitaabka Shamail Muxamadiyah ee uu Qoray Maxamed Bin Jamiil Saynu. Waxa xigi doona Qaybta 4aad haddii rabi idmo.